तीन स्पेनिश जंगल प्राकृतिक प्रयोगशाला हुनेछ नेटवर्क मौसम विज्ञान
तीन स्पेनिश जंगल प्राकृतिक प्रयोगशाला हुनेछ
अनुकूलन नीतिहरू अपनाउँदा शहरी र प्राकृतिक दुबै ठाउँमा मौसम परिवर्तनका प्रभावहरूको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागी, प्रायद्वीप मा तीन वन एक वर्ष को लागी प्राकृतिक प्रयोगशालाहरु मा रूपान्तरण हुनेछ मौसम परिवर्तन र स्पेन मा पाइन जंगल को जोखिम को प्रभाव को प्रभाव मूल्यांकन गर्न र अध्ययन गर्न।
वन र प्राकृतिक वातावरणलाई मौसम परिवर्तनमा राम्रोसँग मिलाउन उनीहरूको अध्ययन र मूल्याation्कन आवश्यक छ। के तपाइँ अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ कि हाम्रो वनहरूमा के अध्ययनहरू सञ्चालन भइरहेको छ?
1 प्रयोगशालाको रूपमा जंगल
2 नेटुरा 2000 नेटवर्कको स्पेसहरू
प्रयोगशालाको रूपमा जंगल
भाल्साइन (सेगोभिया), काजोरला (जान) र ब्यारेन्टेस (पोन्तेवेद्रा) को जंगल, धेरै फरक उचाइमा अवस्थित र एकदमै भिन्न जलवायु अवस्थाको साथ, वातावरणीय प्रभावहरू र जलवायु परिवर्तनमा उनीहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्ने अभ्यासहरू कसरी लागू गर्ने भनेर मूल्या will्कन गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न चयन गरिएको छ।
अनुसन्धानका लागि छनौट गरिएका यी तीन वनहरू एफएससी प्रमाणित छन्। यो त्यस्तो छाप हो जुन तिनीहरूलाई ती हिमालहरूको रूपमा मान्यता दिईन्छ जुन सही व्यवस्थापन गरिएको छ र जसको व्यवस्थापन प्राकृतिक संसाधनको संरक्षण र जैव विविधताको साथ उपयुक्त छ।
एफएससीका प्राविधिक निर्देशक, सिल्भिया मार्टिनेजले यी जंगलहरूमा मौसम परिवर्तनको अध्ययनमा निष्कर्ष निकाल्ने संकेत गरे। उत्तम अनुकूलनको लागि वन जनताको व्यवस्थापन सुधार गर्नुहोस्। यसबाहेक, प्राप्त परिणामहरूको साथ, अनुकूलन योजनाहरू केवल चयन गरिएका जंगलहरूमा लागू गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूलाई सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा एक्स्ट्रापोलेट पनि गर्न सकिन्छ।
नेटुरा 2000 नेटवर्कको स्पेसहरू
तीन छानिएका क्षेत्रहरू राम्रो वन व्यवस्थापनको लागि बाहिर उभिन्छ जुन ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूमा गरिएको छ र साथै धेरै प्रतीकात्मक र लोकप्रिय स्थानहरूको लागि। Valsaín माउन्टेन सियरा डे ग्वाडारामा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समावेश छन्; सिएरास डे काजोरला, सेगुरा र लस विलास प्राकृतिक पार्कमा माउन्ट नवाहोन्डा; र ब्यारेन्टेसका पहाडहरू "साझा हातमा छिमेकीहरू" हुन्, जसले ग्यालशियन संस्कृतिमा गहिरो जरा गाडेको छ र त्यो सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निर्णायक छ।
यसको अतिरिक्त, Valsaín र Navahonda लाई यसमा समावेश गरिएको छ संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रहरूको नेटवर्कको सूची, Natura २०००।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » तीन स्पेनिश जंगल प्राकृतिक प्रयोगशाला हुनेछ
हिउँ डोनट के हो र कसरी यसको गठन हुन्छ?
रहस्यमय बिहानी महिमा बादल र उनीहरूका सम्भावित कारणहरू